Tsiambaratelo momba ny salon: 10 Hevitra ara-barotra azo ampiharina izay afaka manampy anao hiaro mpanjifa bebe kokoa | Martech Zone
Ny Salons dia mampiasa vola be amin'ny toerana misy azy ireo, ny mpiasa sy ny manampahaizana manokana aminy, ny fitaovany ary ny vokatra vokariny. Na izany aza, zavatra iray tsy raharahian'izy ireo matetika ny fampiasam-bola. Ahoana no ahitan'ny mpanjifa ny salon mahafinaritra anao raha tsy izany?
Na dia mety ho zavatra sarotra fifehezana aza ny marketing, dia mbola azo tanterahina ihany, ary tsy mila atahorana. Betsaka ny hevitra ara-barotra nozahana sy notsapaina ho an'ny salon izay miasa tsara amin'ny fisintomana ny mpanjifa sy ny fanatsarana ny fitazonana ny mpanjifa.
Raha tompon-trano sahirana ianao mitady ny hanatsara ny programa marketing, dia vakio hatrany raha te hahalala izay hevitra marketing azonao atao mba hahazoana mpanjifa bebe kokoa.
Manolora programa refer-a-namana - Ny fomba iray hampitomboana ny isan'ny mpanjifanao dia ny fiarahanao miasa amin'ireo efa anananao. Mety manontany tena ianao hoe ahoana. Eny, amin'ny alàlan'ny programa referral mazava ho azy. A programa fandalinana dia programa mikendry ny mpanjifanao ankehitriny. Ity hevitra ara-barotra ity dia mamporisika ny mpanjifanao hanondro namana any amin'ny salon anao amin'ny fanomezana azy ireo fihenam-bidy isaky ny mahomby amin'ny fanovozana. Ny zavatra tsara momba ny programa referral dia ny fahafahan'ny olona manao hetsika mihoatra ny antso mangatsiaka na mailaka avy aminao. Raha avy amina loharano azo antoka sy akaiky ny tolo-kevitra dia azo inoana fa hahazo ny sain'ny mpanjifa vaovao. Ireo mpanjifa voatondro dia hita fa mahatoky kokoa noho ny mpanjifa tsotra. Fanampin-danja iray hafa dia ny faneken'izy ireo kokoa ny fampiasana ny vokatra sy serivisy salonanao.
Mamolavola fiaraha-miasa amin'ny orinasa hafa - Misy fomba maro ahafahan'ny olona manavao amin'ny orinasany. Ny fomba iray hahatongavana eo an-tampon'ny fifaninanana dia ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa hafa. Matetika loatra isika no manao ambanin-javatra ny mety hiaraha-miasa amin'ireo orinasa hafa sy ny fomba hitondrany fifamoivoizana sy fidiram-bola bebe kokoa ho an'ny orinasanao roa. Amin'ny maha salon anao dia afaka miara-miasa amin'ny orinasa marobe ianao. Miankina amin'ny toerana eo an-toerana dia afaka miara-miasa amin'ny orinasa izay eo amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy koa ianao. Ohatra, afaka mifandray amin'ny toerana fanorana tianao ianao, na mety te hiara-miasa amin'ny spa ianao. Amin'ity hevitra marketing ity dia azonao atao ny miditra amin'ny cliente fotsiny fa amin'ny cliente an'ny orinasa hafa. Izany dia ho fandresena fandresena ho an'ny orinasanao roa sy ny mpanjifa koa noho ny fifampiraharahana azony.
Manolora fampiroboroboana salon - Iza no tsy tia fihenam-bidy? Izany no antony mahatonga ny fihenam-bidy, ny varotra ary ny fampiroboroboana dia tetika marketing voasedra ara-potoana foana izay mety amin'ny orinasa rehetra. Ny fampiroboroboana ny varotrao dia mety miankina amin'ny lafin-javatra maro. Mety ho an'ny mpitsidika voalohany, na angamba amin'ny fialantsasatra manokana. Angamba azonao atao aza ny manangana fihenam-bidy na fivarotana isan-kerinandro. Amin'ny fampiroboroboana salon, azonao atao ny mampitombo ny fifamoivoizana ho an'ny salon anao ary mampitombo ny famandrihana. Mazava ho azy, rehefa mihabetsaka ny famandrihana anao dia vao mainka mety hiteraka varotra ianao amin'izay ny fampiroboroboana salon tsara dia afaka mampitombo ny vola miditra ihany koa.
Ampiasao ny marketing amin'ny media sosialy - Miroborobo ao amin'ny media sosialy ny vondrom-piarahamonina hatsaran-tarehy tato ho ato ary zava-dehibe ny hampiasan'ny tompon'ny salon izany. Mametraha kaonty media sosialy foana ho an'ny salono mba hahamora ny fahitan'ny olona liana bebe kokoa ny salonanao. Raha vantany vao manana kaonty miasa amin'ny sehatra media sosialy samihafa ianao, dia aza hadino ny mivarotra ny orinasanao. Amboary ny doka nataonao ary paikady marketing ara-tsosialy mifototra amin'ny sehatra tsirairay hahazoana traikefa manokana ho an'ny mpampiasa. Araraoty ny sehatra fizarana mifototra amin'ny sary ao amin'ny Instagram ary mandefasa endrika mahatalanjona hisarihana ny sain'ny mpanjifa liana. Manatsara ny tenifototra sy ny teny lakile mba hahazoanao karazana fifantohana.
Mahazoa fifandraisana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny mailaka - Raha resaka marketing ny orinasanao amin'ny Internet dia aza atao ambanin-javatra ny mivarotra ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny mailaka. Izany dia natao handrakofana ireo mpanjifa izay tsy manaraka ny kaonty media sosialinao fa nanome ny mailaka anao. Ny tombony azo amin'ny fampielezana ny marketing amin'ny mailaka dia ny hahazoanao valiny betsaka amin'ny vidiny mora. Azonao atao koa ny mampiasa marketing mailaka hanatanterahana ny sasany amin'ireo hevitra ara-barotra voalaza teo. Ohatra, azonao atao ny mandefa mailaka misy rohy fandefasana tafiditra mba hamporisihana ny mpanjifa hanondro ny namany ho an'ny fihenam-bidy. Azonao atao koa ny mampiroborobo ny varotra na fampiroboroboana ho an'ny mpanjifa tsy mahalala amin'ny alàlan'ny mailaka nomen'izy ireo. Izany rehetra izany sy ny maro hafa dia azo atao amin'ny alàlan'ny mailaka ary azonao atao ny manatsara ny fizotrany amin'ny alàlan'ny fampiasana a rafi-pitantanana salon inventory.
Mampiasà rindrambaiko fandaharam-potoana - Ny fampiasana rindrambaiko fandaharam-potoana handaminana fotoana voatondro ao amin'ny salon-nao dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fizotrany ary hahamora kokoa ny fandaharam-potoana ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifanao. Betsaka ny fiasa ho an'ny mpanjifa sy ny mpiasa araraotiny rehefa mampiasa an'ity karazana rindrambaiko ity. Seho iray manamora ny famandrihana fotoana iray dia ny fanavaozana ny kalandrie tena izy izay azon'ny mpanjifa jerena an-tserasera. Izany dia manamora ny fahafahan'ny mpanjifa manapa-kevitra hoe rahoviana izy ireo no te handahatra ny fotoana fanendrena azy ireo amin'ny fitsaboana tiany. Ankoatr'izay, ny fandaharam-potoana fandaharam-potoana dia afaka mampatsiahy ireo mpanjifanao ny fotoana voatondro napetrany ao amin'ny salon-nao. Raha mila manafoana ny mpanjifa, farafaharatsiny mba tsy hampandrenesina anao amin'ny andro. Io dia ahafahanao manafaka ny fotoana hanaiky fotoana hafa.
Midira amin'ny hetsika eo an-toerana - Zavatra iray izay tsy ampiasain'ny salon betsaka dia ny fiarahamonina eo an-toerana. Ny salona tsara indrindra dia misy karazana fifandraisana amin'ny vondrom-piarahamonina satria, rehefa dinihina tokoa, avy aiza ny ankamaroan'ny orinasany. Izany no antony tokony hiezahan'ny salons hanao araka izay fara heriny mba hanatevin-daharana ireo hetsika eo an-toerana. Na ho an'ny fialantsasatra na ho an'ny fampisehoana lamaody ny hetsika, ny fampisehoana ny fanohananao fotsiny dia afaka manaparitaka ny anaran'ilay orinasa ka hampitombo ny mpanjifanao.
Avereno ny fiarahamonina misy anao - Raha miresaka ny fidirana an-tsehatra amin'ny hetsika eo an-toerana dia fomba iray ahafahana manao fifandraisana amin'ny olona ao an-toerana ny mamerina ny mpiara-monina. Angamba mangataha amin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana amin'ny fomba hanampianao ny mpiara-monina. Angamba afaka manome volo maimaimpoana ho an'ireo tsy manan-kialofana ianao. Angamba ianao afaka manampy amin'ny famatsiam-bola hetsika asa soa amin'ny ho avy. Ity dia fomba mahasoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa vaovao izay manafana ny fo.
Raiso anaty lisitra Internet ny salon-nao - Ny antontan'isa tato ho ato dia nampiseho fa ny ankamaroan'ny mpampiasa finday dia mitady orinasa an-tserasera na vokatra an-tserasera alohan'ny hitsidihany ny fivarotana. Izany no antony ilanao ny manao ny orinasanao ho mora hita sy ho hita araka izay tratra. Ny fomba iray hanaovana izany dia amin'ny alàlan'ny lisitra ny asanao amin'ny lahatahiry an-tserasera toa ny ao amin'ny Yelp na amin'ny Google Business. Amin'izany fomba izany, ireo mpihetsiketsika liana dia afaka mahita ny salon anao sy mamantatra ny ora fisokafanao sy ny serivisy omenao.
Ampiasao ny doka famerenana retget - Raha vantany vao mitsidika ny tranokalanao ny mpanjifa, na mividy na miafara amin'ny fividianana azy ireo, dia mora kokoa ny manova azy ireo noho ny mpanjifa vaovao izay mbola tsy nifandray tamin'ny marika mihitsy. Mba hitodihana any amin'ireo karazan-mpanjifa ireo dia tsara kokoa ny manao doka miverina. Raha vao namoaka vokatra na fitsaboana vaovao ianao dia zahao ny lisitry ny mpanjifa teo aloha izay tena mety liana amin'izy ireo ary kendreo izy ireo miaraka amin'ireo doka momba ilay vokatra / fitsaboana voalaza ireo.
Ny fivarotana ny salon-nao dia tsy midika hoe mandany vola be amin'ny takelaka fanaovana dokambarotra na mandefa flyers manodidina ny tanàna. Betsaka ny hevitra ara-barotra azo ampitaina azonao atao anio.
Izany rehetra izany dia ny fifandraisana amin'ny tsenanao kendrena ary koa ny fanokafana ny salon-nao ho an'ny fiarahamonina eo an-toerana. Aza miandry intsony alohan'ny hanombohanao mampihatra ireo paikady marketing ireo mba hahafahanao manatsara azy ireo ho tsara kokoa haingana araka izay tratra.
Tags: mailaka Marketinghetsika eo an-toeranafisondrotanaretargetingfampisehoanamarketing amin'ny salonrindrambaiko fandaharam-potoanaSocial Media Marketing
Suzy Viola dia manam-pahaizana momba ny varotra media sosialy ary mpaka sary. Tiany ny mizara ny fahalalany sy ny zavatra mahaliana azy amin'ny olona rehetra izay mitarika azy ho tonga mpanoratra tsy miankina. Ary Oh! Mpandeha koa izy.
Fijerena ny fampifangaroana ny teknolojia Blockchain sy ny Internet amin'ny zavatra